Raharaha “Tany Gasy” : Mpitory 200 nohenoin’ny fitsarana -
AccueilSongandinaRaharaha “Tany Gasy” : Mpitory 200 nohenoin’ny fitsarana
Nohenoina nanomboka omaly teny amin’ny lapan’ny fitsarana etsy Anosy ireo olona 200 mahery nametraka fitoriana mahakasika ilay raharaha Tany Gasy. Nandalo tsirairay manoloana ny mpitsara izy ireo noho izany. Ny zoma lasa teo no nametraka fitoriana teny amin’ny biraon’ny polisy etsy amin’ny boriborintany fahatelo ireo olona marobe voasoloky ireo, ary rehefa tapitra ny fe-potoana nahafahan’ny mpitandro filaminana nitazona ny dosie, dia izao nalefa eny amin’ny tribonaly izao. Marihina fa efa nisy olona hafa nametraka fitarainana tany aloha, ary rehefa niakatra teny amin’ny fitsarana ny raharaha dia nandresy ny mpitory, saingy tsy tafaverina ny volany satria dia tsy hita popoka ny tompon’ity orinasa mpivarotra tany ity hatramin’izao. Ny taona 2014 no nanomboka nitsangana ny Tany Gasy, izay efa niovaova anarana maro samihafa, saingy olona iray ihany no tao ambadik’izany.
Nanomboka teo no nisoloky, ary nangorona ny volan’ireo mpividy tafaroboka, ny tompon’ity orinasa mpisoloky vahoaka ity. Fantatra ihany koa fa dia vola be amina miliara no efa noraofiny sy niditra tany am-paosiny noho izay hafetsifetsena izay ihany. Raha ho an’ireo tany voalaza fa namidy teny Ambatolampy kely izao, dia olona miisa 3600 no efa voan’izy ireo, izay nahazoany roa miliara mahery, raha namidy enina hetsy Ariary ny iray tamin’izany. Ankoatra ny teny an-toerana anefa dia mbola nisy ihany koa teny Anjeva, tany Antsirabe, Mahajanga, ary Toamasina. Efa nisy vehivavy miisa roa, mpiandry birao tao amin’ity orinasa ity moa efa nampidirina am-ponja vonjimaika. Mbola hifampitadiavana kosa ilay tena atidoha nikotrika amin’izao fotoana izao. Nolazaina fa fitsinjovana ireo “vahoaka madinika” no antony nivarotana ireo tany ireo amin’ny sarany mora dia mora, kanefa dia fanambakana avokoa no tao ambadik’izany. Nohararaotin’ireo mpisoloky ny fihazakazahan’ireo olona tamin’ny fahitana ireo tolotra tamin’ny sarany azo niriranan’ny rehetra.
Tsy nanavahana sarangan’olona
Nijabaka tao anatin’ity asa maloto ity avokoa ny sarangan’olona samihafa. Nahitana olona ambony mihitsy aza ireo olona very vola sy diso fanantenana tamin’izany. Nisy tamin’ireo mpanjifa aza no nividy tany mihoatra ny roa tamin’ity orinasa niovaova anarana ity saingy tsy afa-nanoatra. Hivondrona ao anaty fikambanana iray moa ireo olona voasoloky ireo, ary hanatanteraka fivoriana tsy ho ela mahakasika ity raharaha ity.Tokana ihany ny tanjon’izy ireo, dia ny hamerenana ny vola lasan’ity orinasa mpisoloky ity. Marihina ihany koa fa mbola ny tompon’ity Tany Gasy ity ihany no atidoha tamin’ny fivarotana ny “villa Elisabeth”.
Manoloana ireo resaka mifamahofaho sy ny tsaho aely ary ny fanenjehana ny Fitondram-panjakana amin’izao fotoana izao mahakasika ny fifandraisana sy ny fitsidihana any ivelany, nitondrana fanazavana mahakasika izay indrindra ny Filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina amin’ilay fandaharana ...Tohiny